RASMI: Fabinho iyo Lucas Moura oo ka maqan liiska xiddigaha xulka Brazil uga qeyb galaya Copa America 2019 – Gool FM
RASMI: Fabinho iyo Lucas Moura oo ka maqan liiska xiddigaha xulka Brazil uga qeyb galaya Copa America 2019
Haaruun May 17, 2019
(Brazil) 17 Maajo 2019. Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa ku dhawaaqay xiddigaha bisha dambe uga qeyb galaya Copa America 2019, waxaana laga waayey magacyo waa weyn.
Vinicius Junior, Fabinho iyo Lucas Moura ayaa laga tagay oo aan ka mid ahayn liiska xiddigaha xulka qaranka Brazil uga qeyb galaya Copa America 2019.
Weeraryahanka Real Madrid ee Vinicius oo 18-sano jir ah ayaa horay loogu wacay xulka waa weyn ee Brazil kulamadii ay wajaheen Panama iyo Czech Republic bishii Febraayo, laakiin hadda waa laga tagay sababo la xiriira dhaawac ku soo gaaray u ciyaarista Real.
Fabinho iyo Moura ayaa labaduba seegay shaxda xulkooda Brazil inkastoo ay bandhig cajiib ah ka sameynayaan kooxahooda Ingiriiska.
Fabinho ayaa laga qaaday kooxdiisa Liverpool horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan oo waxaa ku guuleysatay Man City, laakiin waxa uu joogaa final-ka Champions League oo bisha soo aaddan ayuu kooxda Tottenham ku wajahayaa kama dambeysta koobka horyaallada Yurub.
Weeraryahankii hore ee Paris Saint-Germain, Moura ayaa dhinaca kale waxa uu kooxdiisa Spurs u soo saaray final-ka Champions League kaddib markii uu saddexleey u dhaliyey lugtii labaad kulankii Semi-finalka oo ay wajaheen Ajax.
Goolhaye Ederson, Fernandinho iyo Gabriel Jesus oo ka wada tirsan kooxda Manchester City, labada ciyaaryahan Liverpool, Alisson iyo Roberto Firmino si la mid ah weeraryahanka Everton ee Richarlison ayaa dhammaantood ku jira shaxda.
Xiddigaha PSG ee Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos iyo Neymar Jr ayaa dhammaantood ka mid ah 23-ka ciyaaryahan ee xulka Brazil oo la soo xulay.
Yeelkeede, waxaan booskooda xulka helin laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Fred iyo labada xiddig ee kooxda Chelsea David Luiz iyo Willian.
Xulka Brazil ayaa kulankooda furitaanka waxa ay 14 bisha June kula ciyaari doonaan Sao Paulo dhiggooda Bolivia, ka hor inta aysan Salvador ku wajihin Venezuela afar maalmood kaddib.
Kulankooda ugu dambeeya guruubkana waxa ay dib ugu soo laabanayaan garoonka Arena Corinthians ee Magaalada Sao Paulo, halkaasoo ay kula dheeli doonaan xulka Peru 22 bisha June ee soo aaddan.
Shaxda xulka qaranka Brazil ee lagu dhawaaqay oo dhammaysatiran:-
Goolhayeyaasha: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Cassio (Corinthians).
Difaacyada: Daniel Alves (PSG) Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid), Alex Sandro (Juventus), Miranda (Inter Milan), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Eder Militao (Porto/Real Madrid).
Khadka dhexe: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Man City), Arthur (Barcelona), Allan (Napoli), Lucas Paqueta (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona).
Weerarka: Neymar (PSG), Richarlison (Everton), David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City).
Gary Lineker oo tilmaamay kooxda ugu cad cad ee ku guuleysan karta Champions League.
“Lionel Messi uma qalmo xili ciyaareedkan ku guuleysiga abaal marinta Ballon d'Or”